Igbu egbugbu, ọ ga -ekwe omume ka m ga -anọ n'ihe egwu? | Igbu egbugbu
Tụgharị oyi n'ahụ, ọ ga-ekwe omume ka ọ ga-etinye m n'ihe ize ndụ?
Na Cerezo | | Ogbugbu
N'oge na-adịbeghị anya ọ ghọwo akụkọ akụkọ ọzọ mepere emepe na / ma ọ bụ akụkọ ifo banyere ụwa nke nka na, karịa, nke egbugbu. Igbu egbugbu, ọ ga -ekwe omume? M ga -etinye ihe egwu ọ bụla ọzọ ma ọ bụrụ na ekpebie igbu egbugbu nwere oyi?
Eziokwu bụ na nke a bụ ajụjụ a na -ajụkarị. Ma ọ bụ na, ọ nwere ike bụrụ ikpe, na-abịarute n'oge a tụrụ anya ịga ụlọ ihe nkiri igbu egbugbu, mgbe anyị biliri n'àkwà ụbọchị ahụ anyị nọworo na-eche ogologo oge, anyị ga-ahụ oyi na-atụghị anya ya. Yabụ, n'okpuru anyị ga -ekwu maka ihe egwu anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị ahụ onwe anyị n'ọnọdụ a.
1 Ihe egwu dị na igbu egbugbu na oyi
2 Mmetụta nke ọgwụ
3 Ọ bụrụ na ị nwere oyi n'oge na -adịbeghị anya
4 Ịgba egbugbu mgbe ị na -ebute ọrịa
5 Na mmechi, ọ ka mma ịghara igbu egbugbu mgbe ị nwere oyi
Ihe egwu dị na igbu egbugbu na oyi
Nke mbu Anyị chọrọ ichetara gị na na Tatuantes anyị abụghị ndị dọkịta, na ndụmọdụ anyị nwere ike inye gị bụ naanị ezi uche. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ọ kacha mma ịkpọtụrụ dọkịta, onye ga -ama ka esi zaa ma duzie gị nke ọma.
Nke ahụ kwuru, n'agbanyeghị na ha dị jụụ ma nwee ike nwee ọ andụ nke ukwuu na nke ahụ anyị nwere ọmarịcha oge ka ha na -egbu anyị egbugbu, eziokwu bụ na egbugbu abụghị egwuregwu. Yabụ ee ị chere na ị na -arịa ọrịa ma ọ bụ ị nwere ike ịdị, buru ajụjụ ndị a n'uche:
Ogbugbu bụ nnukwu ọnya mepere emepe nke ga -ewe ụbọchị ole na ole iji gwọọ ya. Ka ọ na -aka njọ, ka o yikarịrị ka ị ga -ebute ọrịa, ogologo oge ka ahụ gị ga -achọ ka ọ gbakee ma oyi ma egbugbu. O nwere ike ọ gaghị agwọta nke ọma yana nsonaazụ ya ga -ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ, nke ga -abụ ịlafu ego na ihe egwu maka gị na onye na -ese egbugbu.
Kpọtụrụ dọkịta gị tupu ịga nhọpụta, yana oge ndị ọzọ. N'ezie, enwere ike mgbagwoju anya mgbaàmà nke oyi na nke coronavirus. N'ọtụtụ mba, ọ bụghị naanị na akwadoro ya, kama ọ bụ iwu, ka ị kewapụ iche ma ọ bụrụ na -enyo enyo na ị jidere ya, ma ọ bụ mee nnwale PCR ma ọ bụ ihe yiri ya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na ị ga -edo anya maka ọrụ niile ị na -arụ.
Ọbụlagodi na ọ bụghị coronavirus na ọ bụ naanị oyi dị mfe, ọ ka mma ịkagbu oge a, ọbụnadị maka agụmakwụkwọ. You nwere ike bute onye na-ese egbugbu ma mee ka ọ hapụ ụbọchị ọrụ na ndị ahịa ya (ọtụtụ n'ime ha bụ ndị na-arụrụ onwe ha, yabụ nwaa ime ka ihe dịrị ha mfe, ha enweworị ihe mgbagwoju anya, ndị ogbenye).
Site n'ụzọ, ha na -ekwu na, n'elu, egbugbu na -afụ ụfụ karịa ma ọ bụrụ na ị na -arịa ọrịaEleghi anya n'ihi na ahụ adịchaghị gị mma na nguzogide gị n'ihe mgbu belatara nke ukwuu. Na mgbakwunye, ọ nwere ike bụrụ na emesịa ị ga -enwe mmetụta nke ka njọ, n'ihi ọrụ okpukpu abụọ nke sistemụ na -alụso ọrịa ọgụ nwere: ịgwọ egbugbu na oyi. Ihe ọzọ mere ị ga -eji nọrọ n'ụlọ ma ọ bụrụ na ahụ adịghị gị mma!
N'ikpeazụ, enwere ihe mgbaàmà nke oyi nwere ike imetụta ogo egbugbu ahụ ozugbo. Dịka ọmụmaatụ, ụkwara na -aga n'ihu, ga -eme ka ahụ megharịa, nke nwere ike imetụta anya ikpeazụ nke egbugbu.
Mgbe ị nwere oyi, ihe a na -ahụkarị bụ ị drinkụ ihe. E, Ọ bụ ezie na ọ dị ka ha adịghị emerụ ahụ, nke bụ eziokwu bụ na ọgwụ na -ebukarị mmetụta ọjọọ nke nwere ike imetụta etu egbugbu si dị: dịka ọmụmaatụ, ha nwere ike ime ka ọbara dị nfe, nke ga -eme ka ị gbaa ọbara karịa n'oge usoro a. Ma ọ bụ ị nwere ike ịhụ onwe gị ka ụra na -atụ gị ma ọ bụ na -atụgharị gị anya, nke nwere ike ime ka ị kwụsị nnọkọ ahụ n'ihi na ị na -eche oke egwu.
Ọ bụrụ na ị nwere oyi n'oge na -adịbeghị anya
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị enwewo oyi ma ọ bụ daa ọrịa n'oge na -adịbeghị anya? Ọ bụ ezie na ọ na -adị anyị mma, anyị ga -eburu n'uche na ahụ na -ewe ụbọchị ole na ole iji gbakee, na ọ ka mma ichere obere oge ka anyị gbakee nke ọma. Yabụ, ọ bụrụ na ị ga -eme ọkwa ọhụụ n'ihi na oyi na -atụ gị, gbaa mbọ mee ya opekata mpe izu abụọ. Nke a ga -agba mbọ hụ na ị gbakeela nke ọma yana na sistem gị ji alụso ọrịa ọgụ dị otu narị pasentị.
Site n'ụzọ Ọ na -atụ aro nke ukwuu ka ị ghara ichere naanị, kama zuru ike rie nri kwesịrị ekwesị imecha gbakee. Ka mma ị na -elekọta onwe gị, ngwa ngwa ị nwere ike igbu egbugbu!
Ịgba egbugbu mgbe ị na -ebute ọrịa
Ị nwere ike inwe obi abụọ ma ọ bụ ihe amamihe dị na ya igbu egbugbu mgbe ị bu ọrịa. Azịza ya yitụrụ mgbe oyi na -atụ anyị: ọ bụghị ihe amamihe ma ọ bụ atụ aro, ebe ọ bụ na sistem anyị ji alụso ọrịa ọgụ adịghị nke ọma yana, dịka anyị kwuru, nke a nwere ike imetụta ọdịdị ikpeazụ nke egbugbu.
Ọzọkwa, ọ ga -ekwe omume na, ebe ị nwere ọrịa, ị na -ewere ọgwụ nje. Ọgwụ nje, na mgbakwunye na ịhapụ gị nke ukwuu na achọghị ime ihe ọ bụla, nwere ọtụtụ mmetụta ndị ọzọ nwere ike ime ka gị na egbugbu gị bụrụ chrome. Ya mere, ọ kacha mma ichere opekata mpe otu izu mgbe ị takingụchara ọgwụ ikpeazụ.
Na mmechi, ọ ka mma ịghara igbu egbugbu mgbe ị nwere oyi
Ya mere, Tattoogbu egbugbu na oyi ọ̀ bụ ihe dị ize ndụ? Anyị anaghị eche ọnọdụ dị mkpa ihu, mana nke bụ eziokwu bụ na, ọ bụrụ na ị ga-eyigharị ya, ọ kacha mma ichere ruo mgbe agbakechara gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị ga-ewe otu oge nke ọtụtụ awa iji mee nnukwu egbugbu. Anyi aghaghi icheta okwu mbido na egbugbu bu onya na aru aru, ma mgbe anyi nwere oyi, nchekwa anyi abughi 100%.
Igbu egbugbu na oyi mepere ụzọ ka ohere igbu egbugbu nwee ike ibute ọrịa n'ụzọ dị mfe. A ga-ekpughere anyị na ọrịa nwere ike ibute n'oge ma ọ bụ mgbe anyị gbusịrị egbugbu ahụ. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ihe dị iche iche na-abata ebe a. Mmadu obula bu uwa. Ọ bụghị anyị niile na-ata ahụhụ site na afọ ntachi n'otu ụzọ, ọ dabere na, dịka anyị kwuru, na etu egbugbu ahụ. Obere obere egbugbu nke okwu abughi dika ime ka anyi egbugbu nke na aru azu dum.
Na nkenke, Dịkwa ka anyị kwurula na mbụ, anyị ga -eburu n'uche na ọgwụ ụfọdụ anyị nwere ike iji gwọọ oyi nwere ike imetụta ọbara. na, yabụ, nwere nsonaazụ ozugbo n'oge usoro igbu egbugbu. Na nkenke, mgbe ọ bụla enwere ike, anyị kwesịrị izere igbu egbugbu na oyi.
Anyị na -atụ anya na anyị enyerela gị aka ịme mkpebi ma a bịa n'iche egbugbu na oyi. Ị hụrụ nke ahụ abụghị ezigbo echiche ma ọlị. Gwa anyị, kedu ihe ị chere maka okwu a? Ị nwetụla oge ịkagbu oge ị ga -egbu egbu maka na ị na -arịa ọrịa? Cheta na ị nwere ike ịgwa anyị ihe ịchọrọ, maka nke a, ị ga -ahapụrịrị anyị ikwu!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Tụgharị oyi n'ahụ, ọ ga-ekwe omume ka ọ ga-etinye m n'ihe ize ndụ?
Ejiji Valknut ma ọ bụ eriri ọnwụ, gịnị ka ọ pụtara?
Egbugbu ugwu, gịnị ka ha pụtara?